Barreeffama kana Saffisaan Waliif Dabarsaa‼️ – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBarreeffama kana Saffisaan Waliif Dabarsaa‼️
Akkuma dubbachaa turre lolli Tigraay fi Amaara gidduutti eegaluuf TPLFn waraana baay’ee gara naannoo Amaaraa sochoosaa jirti. TPLFn hanga lafa Tigraay hunda too’attu lola akka itti fuftu beekkamaadha. Lolli kun lola guddaadha.
Akkuma baratame Abiy yeroo lolli jabaate humna addaa Poolisii Oromiyaan fi Milishaan Oromiyaa soddoota isaaf erguun waan hin oolle. As irratti Ijoolleen Oromoo qawwee harka qabdan wanti hubachuu qabdan yeroo lolli Tigraay fi Ethiopia eegalu ilmaan Oromoo lolli kun isin hin fayyaduu irratti hin hirmaatinaa dhimma keessan miti janne isinitti iyyaa turre. Lola Tigraay fi Ethiopia irratti warra deema wareegameef namni abbaa kanaa jadhu dhabamuu qofa osoo hin taane RIB TPLFn boojiteen Abiy waraana keenya miti jadhee akka kaade quba qabdu. Ammas lolli Tigraay fi Amaaraa gidduutti banamuuf deemu ilmaan Oromoo qawwee harka qaban hin ilaallatu hubadhaa! Lubbuu keessan waan isiniis Oromiyaas ummata Oromoos hin fayyanne irratti hin balleessinaa!!
Wanti hubachuu qabdan dhiiga Oromummaaf jacha waan beeknu irratti ilmi Oromoo ajjeefamu hin qabu jannee isinitti iyyaa jirra malee mataan keessanuu warra nu ajjeesaa jiruudha hubadhaa. Waan nu gootan dura Oromummaatu dursa jannetti beekaa!!
Dhaamsa kana saffisaan Waliif Dabarsaa Ijoollee Oromoo qawwee harka qaban hunda biraan ga’aa!!
WAAFFALLI QEERROO OROMOO KANA TA’EE HAFEE??? Berhanu Hundee, Adoolessa 21, 2019 SUNI HUNDUU DABREE HIRRAANFATAMEE?…
RSWO: Ajjeechaan Oromoo Maccaafi Gujii irratti RIXn Raawwatamu Tibba kana Daran Hammaatee Jiraachuu Ajjeechaafi barbadeeffamni…